I-Pico de Loro/Hamilo 1BR Top Floor (I-Quiet Mt View) - I-Airbnb
I-Pico de Loro/Hamilo 1BR Top Floor (I-Quiet Mt View)
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Masette
(Imali yesivakashi ekhokhelwa u-Pico De Loro ayifakiwe)
Iyunithi yonke ingama-45sqm anombhede ongusayizi wendlovukazi kanye nemibhede engamawele emi-2 (eguqulelwa ekubeni yiNkosi). Ingahlalisa abantu abaningi abayi-5 futhi inekhishi nendawo yokudlela 4, 2 e-balc. Iyunithi itholakala esitezi esiphezulu seMyna B enophahla oluphakeme. Inombono wentaba olungele umndeni noma iqembu elincamela uhlangothi oluthule kakhudlwana. Sinomnakekeli endaweni ohlanza indawo yezihambeli ngaphambi kokufika. Amashidi okulala afakiwe. Uhambo olufushane oluya olwandle no-CC.
(Okwamanje alukho uxhumano lwe-inthanethi esakhiweni sethu. U-Pico De Loro ulindele ukuthi lokhu kulungiswe kuphela ngo-April 2022. Nokho, i-wifi iyatholakala kuzo zonke izindawo ezivamile ngaphakathi kwendawo yokungcebeleka).
Sinendawo engcono kakhulu njengoba yonke into iwuhambo olufushane ikakhulukazi iklabhu yolwandle, inkundla yethenisi kanye neklabhu yezwe (nge-lagoon). Sine-wifi ne-cable TV etholakalayo kanye nama-DVD ongawasebenzisa mahhala. Umnakekeli wethu, u-Chato uzokunikeza ukhiye weyunithi. Angaphendula eminye yemibuzo yakho ngesikhathi uhlala.
Umbhede omkhulu ongu-1, imibhede eyidabuli engu- 2, Omatolasi abangu-1
4.76 · 77 okushiwo abanye
I-Pico de Loro ingamahora angu-1.5 kuphela ukusuka e-Manila (usuka e-Alabang udlula e-Ternate) futhi cishe ihora ukusuka e-Tagaytay.
Ngeke ngibe sendaweni kodwa u-Chato umnakekeli wethu uzobe ekhona ukuze ahlangane nawe futhi akunike ukhiye, iphasiwedi ye-wifi. Uma unemibuzo, usengangithumelela imilayezo futhi ngizophendula ngokushesha ngangokunokwenzeka. I-Chato ingase itholakale ukuze iphendule eminye yemibuzo yakho futhi ikakhulukazi njengoba iphathelene nezinto zasendaweni (lapho ungadla khona ngaphandle kwendawo yokungcebeleka, njll). Qaphela ukuthi unakekela namanye amayunithi futhi angathatha isikhathi ukuphendula.
Ngeke ngibe sendaweni kodwa u-Chato umnakekeli wethu uzobe ekhona ukuze ahlangane nawe futhi akunike ukhiye, iphasiwedi ye-wifi. Uma unemibuzo, usengangithumelela imilayezo futhi n…